Tsy Nanome Rariny ny Vavolombelon’i Jehovah ny Fitsarana Tampon’i Rosia
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Chichewa Chitumbuka Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Haoussa Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Italianina Tiorka Tseky Tsonga Vietnamianina Yorobà
20 APRILY 2017
Tsy Nanome Rariny An’ireo Vavolombelon’i Jehovah ny Fitsarana Tampony any Rosia
NEW YORK—Tapitra izay ny andro fahenina nihainoana ny raharaha momba ny Vavolombelon’i Jehovah. Naharitra tapa-bolana ilay fitsarana. Nivoaka androany ny didim-pitsaran’ny Fitsarana Tampon’ny Federasionan’i Rosia. Nekeny ny fangatahan’ny Minisiteran’ny Fitsarana hoe hofoanana ny Foiben’ny Vavolombelon’i Jehovah any Rosia sy ireo fikambanana ara-pivavahana (LRO) miisa 395 ampiasain’izy ireo any. Mihatra avy hatrany io didy io.
Hoy i Yaroslav Sivulskiy, mpitondra tenin’ny Vavolombelon’i Jehovah any Rosia: “Diso fanantenana tanteraka izahay sady manahy be hoe inona no mety ho vokatr’izany eo amin’ny asa ara-pivavahana ataonay. Hangataka famerenam-pitsarana ny Vavolombelon’i Jehovah. Manantena izahay fa tsy ho ela dia hohajaina indray ny zonay, ary harovana izahay satria tsy mampidi-doza izany ny fivavahanay!”
Manana 30 andro ny Vavolombelon’i Jehovah any Rosia hangatahana famerenam-pitsarana. Hisy mpitsara telo handinika an’ilay raharaha indray.